Taliyaha Cusub ee Ciidanka AMISOM oo xilka la wareegay – Radio Daljir
Taliyaha Cusub ee Ciidanka AMISOM oo xilka la wareegay
Febraayo 1, 2018 8:09 b 0
Taliyaha cusub ee Ciidanka AMISOM ee Soomaaliya ayaa xilka taliyaha AMISOM kala wareegay taliyihii hore ee Ciidanka AMISOM Jen. Ismaan Nuur Subagle oo xilkan hayay sanadkii la soo dhaafay.
Taliyaha cusub ayaa u dhashay Dalka Uganda waxaana uu xilka kala wareegay Taliye Subagle oo u dhashay Dalka Jabuuti,iyada oo munaasibadda ay xilka kula kala wareegayeen ay ka dhacday Xarunta ugu weyn AMISOM ee Muqdisho.
Guddoomiyaha AMISOM sidoo kalena ah ergeyga midowga Afrika u qaabilsan Howlgalka AMISOM Ambasaddor Madiera ayaa goobjoog ka ahaa minaasibadda xil wareejinta.
Taliyaha cusub ee AMISOM Jen.Jim Beesigye Owoyesigire,ayaa waxaa uu leeyahay ku dhawaad 40 Sano oo xirfad Ciidan ah,waxaana uu taliye ka soo noqday Ciidanka Cirka iyo kuwa dhulka ee Dalka Uganda.
Guddiga doorashooyinka Somaaliya oo sheegay inay qabanayaan doorashada 3 kamid ah kuraasta barlamaanka (dhegayso)